iPhone တွေ Storage ပြည့်သွားရင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ? – MyTech Myanmar
iPhone တွေ Storage ပြည့်သွားရင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ?
ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီလိုမျိုး Storage ပြည့်သွားတာမျိုးကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်း ၅ ခုကို ဖော်ပြပေးလိုကပါတယ်။
iOS 11 တင်ထားပြီးတဲ့ဖုန်းတွေဆိုရင် Setting – Camera – Formats ထဲမှာ Most Compatible အစား High Efficiency နဲ့ပဲ ရိုက်တာက ကိုယ်ရိုက်လိုက်တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို Storage ၂ ဆလောက်သက်သာသေတဲ့ HEIF Format နဲ့ သိမ်းပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဓါတ်ပုံတွေကြောင့် Storage ပြည့်တာကို လျော့နည်းစေမှာပါ။
App တွေ၊ အထူးသဖြင့် Social Media App တွေက Cache အနေနဲ့ ဖုန်းရဲ့ Storage တွေကို အများအပြားယူထားလေ့ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက App ရဲ့ Media Storage မှာ ပြန်ပြီးဖျက်ပစ်လိုက်ပါ။
MyTech Myanmar2018-04-30T12:40:56+06:30April 30th, 2018|HowTo, Mobile Phones, Mobile Phones|